"Izay ilain’i Jehovah aminao, dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindrampo ary ny hanaraka an’Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena."Mika 6:8
Ry kristiana namana, fantatr’Andriamanitra ny toe-pontsika tsirairay avy. Amin’ny alalan’i Mika mpaminany no anoroany antsika fomba telo hitondrana ny fiainana, mba hahitana fitia eo imasony.
-Ny hanao ny marina. Mahitsy amin’ny fiteny, fihetsika, fifandraisana amin’ny hafa. Izany fahitsiana izany dia tsikaritra avy hatrany, ao anaty tontolo feno lainga sy fihatsarambelatsihy. Io no fototry ny fijoroana amin’ny maha kristiana. Io dia mampiseho iray amin’ireo toetran’Andriamanitra.
-Ny ho tia famindrampo. “Vokiso ny famindramponao nony maraina izahay, mba hihobianay” (Salamo 90:14). Andriamanitra no loharanon’ny fahatsaram-panahy, ary Jesosy no fanehoana izany tanteraka. Ny fahatsaram-panahy no mitaona antsika hikatsaka ny soa ho an’ireo manodidina antsika, sy hanome azy izay ilainy ara-panahy, ara-pitiavana na ara-bola, ka tsy ho kivy noho ny tsy firaharahana na ny fanambaniana.
-Ny hanaraka an’Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena. Ireo zavatra roa voalohany dia mikasika ny fifandraisantsika samy olombelona; ity fahatelo kosa dia mahakasika ny fihetsika ataontsika eo anoloan’Andriamanitra. Izy no Mpahary antsika, Ilay Andriamanitra Mpamonjy. Izy no manohana antsika eo amin’ny fiainana maha kristiana antsika. Raha tena mahatsapa isika fa avy amin’Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia hanetry tena mandrakariva eo anatrehany, ary hiantehitra amin’ny fanampiany, mba hanaovana izay sitrapony isanandro.
Iray ihany no nahatanteraka an-tsakany sy an-davany izay nandrasan’Andriamanitra amin’ny olombelona, dia Jesosy Tompontsika. Avy any an-danitra Andriamanitra no nanambara taminy hoe: “Ianao no Zanako malalako, Ianao no sitrako” (Marka 1:11).
Asaina isika hanaraka sy haka tahaka Azy.